काठमाडौं, २१ जेठ । वर्षाको झरी होस वा प्रचण्ड गर्मी, पुसमाघको चिसो मौसम होस वा काठमाडौंको धुलोधुँवा, कलिलो तथा वुढ्यौली उमेर त्यसमाथि खुला आकाशमुनीको कहर सँहदै बस्न कस्लाई पो मन लाग्ला र ! तैपनि काठमाडौंका...
काठमाडौं, १३ जेठ । पत्रकार तथा कवि कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को १७ औं स्मृति दिवसको अवसरमा आज काठमाडौंमा पत्रकार र साँस्कृतिककर्मिहरुले संयुक्त प्रभातफेरी निकालेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग सम्बद्ध पाँच पत्रकार संगठन र जनसाँस्कृतिक महासंघको...
सिन्धुली, ११ जेठ । तेह्रौं सताब्दीमा बनेको हरिहरपुरगढी ओझेलमा छ । चौधौं शताब्दीमा बनेको सिन्धुलीगढी तत्कालीन ब्रिटिस सेनालाई पराजित गरेको गौरवशाली इतिहास बोकेर बसेको छ । अब यी दुई स्थल पदमार्गले जोडिने भएका छन् । यी...
३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा पत्रकारले देशभर शुक्रबार प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर र अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सञ्चार साधनसहित...
२७ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले संसदमा पठाएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संविधानको मूल मर्म विपरित रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेकेा छ । बैशाख २६ गते दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्धमा भएको भन्दै महासंघले...
काठमाडौं। तिमिल्सिना समाज नेपालको ९ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । शनिवार ललितपुरको नेशनल ल कलेजको सभाहलमा सम्पन्न महाधिवेशनले नवराज तिम्सिनालाई अध्यक्षमा सर्वसम्वत चयन गरेको छ । अध्यक्षका प्रत्यासि पूर्व ए.आई.जी. कल्याण कुमार तिम्सिनाले अर्का...
एक पटक के भएछ भने ‘नेपाल समाचारपत्र’ले सुस्तामा भारतबाट सीमा मिचिएको समाचार तस्वीरसहित छापेछ। यथार्थ जनतामा ल्याइदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तस्वीरसहित त्यो समाचार छापेको बताउँछन् पुष्करलाल श्रेष्ठ। त्यस बेला त्यो समाचारले चर्चा पनि पायो। त्यस बेला...
शान्ता सिंह पुत्रवियोगमा थिइन् । कान्छो छोरा बितेको पाँच महिना मात्र भएको थियो । ०३७ साल माघको मुटु कमाउने जाडो । घरायसी धन्दा गर्दै थिइन् । तत्कालीन नेकपा चौमका कार्यकर्ता मेघराज आचार्य पत्र बोकेर...
प्रविण अधिकारी/इलाम, १८चैत। नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जनश्रमदानलाई निरन्तरता दिएका छन् । सरकारको प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेता कार्यकतामाथि धरपकट बढीरहेका बेला समेत नेकपाका नेता कार्यकर्ता जनश्रमदानमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय पूर्वका...